Nokia ga - egosiputa Nokia X na May 16 | Akụkọ akụrụngwa
A ga-egosi Nokia X na Mee 16
Eder Esteban | | Mobiles, Noticias
Izu ole na ole gara aga na-agbasa banyere ekwentị Nokia ọhụrụ. Ruo ugbu a, enwere mgbagwoju anya banyere aha ya. Ebe ọ bụ na mbụ e kwuru na ọ ga-abụ Nokia X, ma emesịa ekwuru na ọ ga-abụ X6. N'ikpeazụ, a kpọbatawo akwụkwọ ịkpọ òkù maka mmemme ihe ngosi. Ya mere anyị amataworị na aha ya ga-abụ Nokia X.
Ekwentị ghọrọ nke mbụ nke ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Na mgbakwunye, dịka anyị gwara gị, anyị ekwenyelarị ụbọchị ngosi ngosi maka ekele maka ịkpọ oku a. Anyị nwere naanị izu abụọ iji mara ekwentị ọhụrụ nke ika ahụ.
Kemgbe ọ ga-abụ na Mee 16 ka ekwuputara Nokia X a. Firmlọ ọrụ Finnish nọ na Beijing ugbu a, na-ekere òkè n'ihe omume ụbọchị ise ebe ha na-egosi ekwentị ha niile. Ngwaọrụ ọhụrụ gị sokwa na ha.
Ekwentị a kwere nkwa ịbụ onye pụrụ iche maka ika ahụ, yanana ọ ga-abu nke izizi n’ime katalọgụ ya ga-eji notch. Obi abụọ adịghị ya na atụmatụ na-aga n'ihu na-eweta esemokwu n'etiti ndị na-azụ ahịa, ndị na-akwadoghị nkọwa a na ihuenyo. Mana nke ahụ na-aga n'ihu ịnụ ụtọ nnukwu ewu ewu na gam akporo.
N'eziokwu, na òkù onwe ya maka ihe ngosi ngosi ngosi nke Nokia X anyị nwere ike ịhụ na enwere ọkwa n’elu. Ya mere akwụkwọ mmado ahụ n'onwe ya arụ ọrụ dị ka nkwenye na ekwentị ga-enwe atụmatụ a.
Ole na ole nkọwa banyere ngwaọrụ e leaked otú. Ọ bụ ezie O yikarịrị ka ọ ga-abụ na izu ndị a izu nkọwa ndị ọzọ gbasara ekwentị tupu okwu gi. Anyị kwesịrị ị bea ntị na Nokia X a, ekwentị izizi nke ika ahụ nwere ọkwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » A ga-egosi Nokia X na Mee 16
Nke a nwere ike ịbụ smartwatch ị na-eche ịzụta otu
Nintendo Switch Online ga-abata na Septemba nke afọ a